Ndị Kachasị Mkpa Ndị Ahịa Ga-amụta | Martech Zone
Nwunye m mechara nwee ohere iji dochie laptọọpụ ya dị afọ 8, nke na-amalite ịrụ ọrụ dị ka ihe nhazi okwu Nwanna site na ngwụsị 80s, ọ bụghị naanị ngwa ngwa. Ọ bụ Dell nwere RAM 512 MB, yana draịvụ RAM 80 MB. Ọ bụ nwayọ, nke na-adịghị agbanwe agbanwe, ihe mkpuchi crank ahụ apụwo n'ihu. O mechara zụta Samsung Netbook si Best Buy.
Ọ dị mma, nke ahụ abụghị ezigbo blog-kwesịrị, mana enwere nkuzi na ya.
N'ihi na anyị amaliteghị ile anya Best Buy na mbu.
Dịka onye ji ịnụ ọkụ n'obi na-anụ ọkụ n'anya, ahụrụ m Fry n'anya. Ha enweghị nhọrọ ihe nkiri na egwu egwu Best Buy nwere, mana ha nwere elektrọnik karịa nke ị maara. Ọbụna ndị Amish ga-azụta ihe. Amaghi na ha mere igwe oku oku USB? Emeghị m, ma ọ bụrụ na ha enweta ya, m ga-azụta ya. Ha nwere ike nweta ya.
Ya mere, akpọrọ m nwunye m na ngalaba laptọọpụ na Fry's, mgbe ọ nyochachara nyocha Weebụsaịtị Patric Welch, ma gosi ya ihe netwọkụ nwere ike imere ya. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe ya dị na ntanetị, yana n'ihi na ọ na - emegharị ahụ anya, netbook bụ nhọrọ kacha mma.
Ka anyị legharịrị anya n’ihe karịrị nhọrọ iri na abụọ, o nwetụrụ obere nkụda mmụọ, maka na ọ dị ka enweghị ọdịiche dị n’etiti ha, ma e wezụga ọnụahịa.
Anyị gosipụtara otu n'ime ndị na-eto eto na-ere ahịa na mpaghara ahụ, na Toni gwara ya ihe ọ chọrọ. “Apụghị m ịghọta ọdịiche dị n'etiti nke ọ bụla n'ime ha?”
“You chọghị akwụkwọ ntanetị,” ka ọ kwụsịrị ịzụ nwa ahụ. "Want chọrọ laptọọpụ."
N'ihi na laptọọpụ ka ibu, na-ejidekwu ihe, na-enye gị ohere ịchekwa egwu na foto. ” (Nke ahụ ziri ezi, nwanyị na-achọ kọmputa chọrọ naanị ịchekwa foto ụmụaka na listi ọkpụkpọ egwuregwu Josh Grobin Pilates.)
Ego mmefu ego pere mpe, ya mere anyi choro ihe dika $ 300. Laptọọpụ ndị ahụ bụ $ 500 na karịa.
Anyị kwuru na anyị ga-eche maka ya, ma gagharịa n'ụlọ ahịa ahụ, ebe nwunye m kwupụtara banyere otu nwoke ahụ sibeghị echegbu onwe ya ige ntị n'ihe ọ chọrọ. Agwara m ya ka ọ laghachi azụ ma nwaa otu oge ọzọ. Anyị gosipụtara otu okenye, onye mere ka ọ gụchaa ajụjụ mbụ ya.
"Aghọtara m na netbook na-adọrọ adọrọ, mana ị kwesịrị n'ezie iche maka laptọọpụ," ka o mechara kwuo.
Agwara m nwoke ahụ, “Lee, m na-etinye ụbọchị niile, ụbọchị ọ bụla na ịntanetị, na-ejikwa laptọọpụ. Amaara m ihe dị na kọmputa ya, amakwaara m na naanị netbook ka ọ chọrọ. ”
Ma nwoke ahụ nọgidere. Ọ gbalịrị idu anyị gaa na laptọọpụ $ 600. "Blah blah blah music, blah blah blah photos," ka o kwuru. Anyị kelere ya maka oge ya ma pụọ.
Nkụda mmụọ, na mgbe ezigbo ike rant reminiscent nke Chevy Chase na "Christmas Vacation," nwunye m kpebiri inye Best Buy nwalee. Anyị ka nụrịrị site n'aka onye ahịa ọzọ nke Fry na Best Buy nwere otu netbooks maka ọrịre maka ọtụtụ ihe na-erughị nke Fry? dịkarịa ala 25% na di na nwunye ikpe.
Agara m n'ụlọ ma lee egwuregwu Colts, na elekere elekere mgbe nke ahụ gasịrị, Toni lọtara ụlọ ọhụrụ Samsung netbook, nke bịara nke ọma n'okpuru mmefu ego mbụ ya. Nke a bụ $ 50 na-erughị otu ụdị ahụ ha nwere na Fry's, na ọ bịara na mgbakwunye ole na ole.
Agara m gwa nwa okorobịa ahụ ihe m chọrọ ma jụọ ya ụdị nke m ga-ahọrọ. Ọ tụrụ aro ka nke a mee, kọwaa ihe mere o ji bụrụ nhọrọ ka mma, m wee zụta ya. ”
Dị Mfe, enweghi mgbu, na ngwa ngwa.
Enwere m ezigbo ndakpọ olileanya na ndị ahịa Fry. Ha gaara ere obere netbook jiri obere mbọ. Kama nke ahụ, ha egeghị ndị ahịa ha ntị, ha mere nhọrọ nke aka ha? ugboro abụọ! ? furu efu ere ya.
Kaosinadị, onye kacha zụrụ ihe nụrụ ihe ege ntị, zaa ajụjụ ndị ahụ, wee ree kọmputa. Ọ bụghị nnukwu nsogbu, m ga-ekweta, mana ọ rere $ 250 na ihe na-erughị nkeji 10. Nke ahụ bụ $ 1,500 kwa awa ROI.
Ọ bụ nkuzi bụ isi na onye ọ bụla na-eresị ndị ọzọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ: gee ndị ahịa gị ntị. Echela na ihe ha chọrọ bụ ihe jọgburu onwe ya, na ị makwaara nke ọma. Ma ọ dịkarịa ala wepụta oge iji gee ntị n'ihe kpatara ha, ma hụ ma nke ahụ bụ n'ezie ihe ha chọrọ. Jụọ ha ma ha ewerela nhọrọ gị dị ka nhọrọ ọzọ, ma ọ bụrụ na ha achọghị ya, amanyela ha ịzụta ihe masịrị gị.
Ọ bụrụ na ndị ahịa Fry mere nke a, ha gaara ahụ na nwunye m chọrọ n'ezie ma ọ bụ chọọ bụ netbook, ha gaara enweta iguzosi ike n'ihe ya naanị site na ịge ntị. Ma ọ bụrụ na o kpebie na ya chọrọ laptọọpụ, ọ ga-azụta ya n'aka ndị mere ya ihe ọma oge mbụ.
Ànyị ga-alaghachi na Fry's? Eleghị anya. Ha nwere ihe dị jụụ. Anyị ga-aga ebe ahụ mgbe anyị chọrọ ịzụrụ nnukwu ihe? Ikekwe, ma eleghị anya ọ bụghị. Mana anyị ga-abanye ebe ahụ jiri nyocha, mkpebi emerela, anyị ga-enweta ihe anyị chọrọ, karịa ịjụ ndị ahịa ajụjụ ọ bụla.
Ma ọ bụ na anyị ga-aga Best Buy. Ha na-ege ntị ma ọ dịkarịa ala.
Tags: zụrụ kacha mmaigheegeige ntịndị ahịaọrịreonye na-ere ahiaere ahịa
You bụ Enyi ma ọ bụ nru ububa?
Dec 14, 2009 na 1:25 PM
Ekwenyere m. M na-echeta a yiri ahụmahụ si 9 afọ gara aga, mgbe m ga-eme n'ọdịnihu na di m kpọọrọ m zụọ ahịa maka mgbanaka njikọ aka. Ekpebiri m na achọrọ m ụdị egwu emume ncheta karịa solitaire ọdịnala ọdịnala. Anyị gara otu onye na-ere ahịa goodu ma ozugbo ahụ onye na-ere ahịa jidere anyị. Anyị gwara ya na anyị na-agba mgbaaka na ịke achọ m. O ji oge niile anyị nọrọ ebe ahụ na-agba m ume na m chọrọ solitaire. Enwere m ike iche n'echiche ihe m gaara eme ma ọ bụrụ na di m gara ebe ahụ naanị ya, ikekwe ihe dị oke ọnụ karịa nke m. N’ezie, anyị alaghachighi n’ime ụlọ ahịa ahụ maka ịzụrụ ọla mma n’ọdịnihu.
Dec 14, 2009 na 6:05 PM
Akwa post! Ọrịre ahịa kwesiri ị heeda ntị na nkuzi a. Ọ bụrụ na mmadụ na - eziga “akara nzụta” ewepụla ha n’ahịa ahụ - kwuo ire ya! 😀